Prostar sele OEM & ODM Iinkonzo ukususela ekusekweni kwayo ngo-1998 Ngamava isityebi ejongene abathengi ezivela kulo lonke ihlabathi, Prostar uyazi indlela yokukhonza abathengi okusemandleni ethu ulwenziwo kwaye komphakathi yaziwa njengomnye lomniki ulwenziwo ilungileyo kwi-mveliso.
Xa kuthelekiswa nezinye abavelisi abaninzi, Prostar uye ngabanye bethu R & isebe D, iqela engineering kunye hlula tooling. Iiyunithi zoshishino ngamnye prvide ngokupheleleyo-umsebenzi R & D kwi-hardware ne-software ukuhlangabezana OEM & ODM iimfuno.
Prostar ukholelwa ngokwenene ukuba inkonzo elungileyo nguMthengi neccessary. Ngenxa yoko, Prostar khathala okuninzi malunga emva kokuba-kwiintengiso provids elizeleyo window ixesha. Zonke ngabathengi bathenge Prostar akwazi ukufumana inkxaso ngexesha ngokuthi esishiya umyalezo okanye ukubiza abathengi kaXakeka ukusuka Inkxaso lewebhusayithi yethu.